Kabinetra Hazoboboka, mampiredareda ny afon’ny hatezeram-bahoaka any Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Toy ny hoe tsy ampy ireo olana an-tokantranon'i Zimbaboe
Voadika ny 12 Mey 2019 4:39 GMT
Niatrika ny tstindry tsy mitsahatra mba hisian'ny fiovàna, roa herinandro lasa izay dia nohavaozin'i Robert Mugabe, ilay mpitondra an'i Zimbaboe tratry ny fahirano, ny governemantany, saingy tsy nahavita kely akory mba hampihenana ny fijalian'ny firenena izay ravan'ny fitarihana gaboraraka sy toekarena tsy mahomby. Ilay fanavaozana, izay tsy dia tena fanavaozana loatra, dia nahitana minisitra tokana monja voaroaka ary ankehitriny dia nomena ny anarana hoe ”fanavaozana hazoboboka.”
Andro iray nialohan'ny Andron'ny Mpifankatia, tamin'ny fotoana nahanety azy tsara, naneho ny tsy fankatoavany ilay governemanta vaovao sy ny fisondrotan'ny vidim-piainana tafahoatra teny an-dalambe ireo vahoaka nijaly nandritra ny fotoana naharitra tao Zimbaboe. Voalohany, nisy ny Women of Zimbabwe Arise (WOZA) (Vehivavin'i Zimbaboe Mifoha) sy ireo lehilahy izay nahagaga ny polisy Zimbaboeana faly. Ny fotoana efatra farany nanaovan-dry zareo ny diabeny rehefa Andron'ny Mpifankatia, 14 Febroary tamin'izay. Ity no fotoana voalohany nisian'ny lehilahy nanatevna laharana ny WOZA tamin'ilay diabe.
Tany Bulawayo, tanàna faharoa ao Zimbaboe, olona an'arivony eo no nifindra toerana mba hanatrehana ilay fihetsiketsehana izay nisosa tsy nisy fanapahana hatramin'ny farany mandra-pitsambikin'ireo polisy tamin'ny herisetrany mahazatra azy tany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Ratsy kokoa noho izany ny tao Harare, izay in-droa betsaka noho izany ny olona.
Avy eo nankany amin'ny Parlemanta ilay fihetsiketsehana tamim-pilaminana, nihira tamin'ny teny Shona, ‘vita ny fe-potoananao – efa nijanona ela loatra ianao’. Rehefa nanakaiky ny fidirana ilay andiany, nitifitra baomba mandatsa-dranomaso tamin'ireo vondron'olona ny polisy mpandrava korontana. Tamin'ny voalohany, nihemotra ilay vondron'olona, fa avy eo dia niverina nivondronatamim-pahasahiana indray, nitsangana ary nanipy niverina ireo tranona baomba mandatsa-dranomaso; nahavoa ireo rindrin'ny Parlemanta ary nandroaka ireo nijery teny amin'ny lavarangan'ny Parlemanta hiverina tany anatiny.
Olona manodidina ny 250 teo no voasambotra. Efa navotsotra tsy nisy sazy ny ankamaroan'izy ireo.
Andro roa taty aoriana, niverina teny an-dalamben'i Harare ireo mpiaradia malalaka mpomba ny MDC sy ireo mpikambana ao amin'ny Firaisambe Nasionalin'ireo Mpianatra ao Zimbaboe (ZINASU). Niavaka ireto fihetsiketsehana roa farany ireto, noho ny namalian'ireo mpanao fihetsiketsehana ny herisetra nataon'ny polisy ,
Nilaza ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana: ”Ny zava-nitranga dia satria nanakaiky ny toeram-pivarotana XIMEX teo akaikin'ny Birao Foiben'ny Paositra izahay, nihazakazaka hamely ny Parlemantera Madzimure ny polisy ary avy eo rehefa niezaka ny hanavotra azy izahay, niezaka ny hanohitra ny polisy ary tsy nanan-tsafidy hafa ankoatra ny hamely kely izahay mba hamotsoran'izy ireo azy.”
Namelabelatra izy: ”Tena ny zavatra nataony tamin'ilay Parlemanterantsika no zavatra nataonay tamin'izy ireo. Indrisy, angamba nahare narary kokoa noho ilay Parlemanterantsika izy ireo”.
Fanindroany izao tamin'ity herinandro ity ireo mpanao fihetsiketsehana tezitra no nanohitra ireo herisetran'ny polisy. Tamin'ny Talata, nikarakara fihetsiketsehana faobe tany Harare sy Bulawayo ilay vondrona mpanao tsindry Women of Zimbabwe Arise (WOZA), nanamarihany ny faha-5 taonan'ny nakalazan'izy ireo ny Andron'ny Mpifankatia ary nizaràny ny Satam-bahoaka. Nilaza i Jenni Williams, mpandrindra ny WOZA izay niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Harare, fa niatrika ny polisy mpandrava korontana izay nitifitra baomba mandatsa-dranomaso izy ireo, saingy naverin-dry zareo mpikatroka nalefa tany amin'ny polisy ireo tranona baomba ireo ho valin'izany.
Tsy mahafaly ny vahoaka any Zimbaboe ilay fitobohan-draharaha (fanamarihana: entina hilazàna toejavatra iray tsy miova, fa toy ny omaly ihany ny anio). Firenena anaty fikomian'ny mpitsabo, mpitsabo mpanampy, mpampianatra, mpianatra eny amin'ny oniversite ary ny mpanohitra na nikarakara fihetsiketsehana nandritra izay herinandro vitsivitsy lasa izay no atrehan'ny governemantan'i Mugabe. Azo antoka fa mihodina ny fironana.
Niafara tamina fivondronana vaovao teo amin'i Morgan Tsvangirai sy ny rantsany ao amin'ny MDC tamin'ny Alahady tolakandro tao Highfield, faritra ivelan'ny tanànan'i tany Harare izany rehetra izany. Nampitaintaina hatramin'ny minitra farany ny fahafantarana raha toa ka hisy na tsia ilay fivoriana satria nifamaly tamin'ny polisy ny MDC mba hahafantarana raha toa ka ho afaka ny hanao izany fivoriana izany ry zareo na tsia. Araka ny Didim-pamoretana sy ny Lalàna Mifehy ny Fiarovam-bahoaka (POSA), heloka bevava ny fanaovana famoriam-bahoaka tsy nahazo alalana avy amin'ny polisy. Tsy ahafahana milaza na nisy ilay fivoriana na tsia ireo vaovao farany eo am-pelatanana.
Toy ny hoe tsy ampy ireo olana an-tokantrano ireo, niatrika hetsika roa hafa izay nanamarina ny fiolonolonany amin'ireo diplaomaty manerana ny tany ihany koa i Robert Mugabe. Voalohany, tsy noraharahian'ny Praiminisitra sinoa i Zimbaboe nandritra ny fitetezany tselika tao Afrika izay nataony mba hanamafisana ireo fifandraisana ara-barotra. Izany dia na teo aza ny ”politikan'ny fitodihana any atsinanana” an'i Mugabe izay nahitàna an'i Mugabe nitady fanampiana ara-toekarena tany amin'ny Faritra Atsinanana rehefa nanapaka ny ampahany lehibe tamin'ny fanampian'izy ireo ho an'ny governemantany ireo firenena tandrefana. Toy ny hoe tsy ampy izany, nipoitra tamin'ny herinandro farany teo fa tsy nasain'i Frantsa hanatrika ilay fihaonana an-tampony Frantsa-Afrika i Mugabe, tany Cannes.
Ao anatin'ny toejavatra tsy ahità-mitsinjo ity governemanta ity.